KORIINTA CARUURTA – Mope ry
Inkastoo cunug walbo yahay gooni, ciyaalka waxey u hurmaraan si yaabo la saadaalin karo. Kuwan waxaa la dhahaa marxeeladaha kobaca ilmaha. Waxaa jirto afar qeyb oo ey ciyaalka u hormaraan: garashada, xiriirka iyo luuqada, bulshada iyo dareenka, iyo jir ahaan. Herarkan waxey kaa caawinayaan in aad fahanto sida cunugaaga wax u barto una koro.
Waalidku waxay ku xidhan tahay inay xuduuda u dejiso oo ay u adkaysato xanaaqa ilmaha.
Markuu gaaro da’da sadex sano, cunuga wuxuu degganaan. Cunugga waxuu barataa xirfado cusub. Si kastaba ha noqotee, cunugga wuxuu weli u baahan yahay xannaanada iyo ilaalinta joogtada ah ee qofka weyn.
Markuu cunugga gaaro da’da afar sano, cunuggu badanaa wuxuu u baahan yahay qof weyn si uu ugu dulqaado niyad jabka iyo guul darrooyinka iyo mararka qaar inuu xasillo ciyaarta..
Markuu cunugga gaaro shan sano, cunugu wuxuu bilaabayaa inuu is xukumaa. In kasta oo cunugga dhinacyo badan u madax bannaan yahay, haddana wuxuu wali ugu baahan yahay waalidiinta in ee caawiyaan. Cunugga wuxuu ubaahanyahay dhiirigelin iyo taageero, ciyaar la baro iyo horumar bulsho iyo damiir ahaanba.
Markuu cunugga lix sano gaaro, waxaa laga rabaa inuu is maalmulo wuxuu. In kasta oo cunugga xanaanada dhigto waa inuu u barataa sida wax loo sameeyo tusaale (labiska, si oo qubeysato, si oo u lugee iskuulka.) Waalidku waa inay taageeraan madaxbanaanida iyo horumarka niyadeed ee ilmaha saaxiibadiisa iyo dhaq dhaqaaqa. Ilmuhu wuxuu u baahan yahay dhiirrigelin waaliddiinta iyo ammaan isku day ah.
Waxyaabaha aad sameyn karto si aad u dhiiri galisid koritaan caafimaad leh:
U jawaab cunugaaga markasta.
Kula hadal cunugaaga cod jilicsan oo nasteexo leh.
Waalidka waa waajib inuu ixtiraamaa cunugga markasta. Sidan, cunugga wuxuu bartaa inuu ixtiraamo qofka weyn iyo dadka kale
Caruurta markey koriyaan waxay baranayaan waxyaabo cusub mar walba. Waxaa kaloo muhim ah ilmaha in ay isku haleyn karaan dadka waaweyn (aamini karaan) iyo in ilmaha la daryeelayo.
Dhageyso Abdulkadir Isak hadalka ku saabsan koriinka caruurta .
Mabda’ada qarsoon ee caruurta
Caruur kastaa waa gaar oo wuxuu leeyahay qiimo sida uu yahay, waxaanu xaq u leeyahay in la dhagaysto, arko, la eego, oo la fahmo.
waalidku ayaa ka caawin doona ilmaha inuu koro, kaas oo loo yaqaan doonashada runta, wanaagsa, iyo quruxda, sidoo kale calaada iyo nabada.
Caruurtu waxay leeyihiin xuquuq waxbarasho, daryeel iyo in lagu dhiiri geliyo fikir ka dhiibasho. Ilmuhu waxa uu xaq u leeyahaya inuu ciyaaro oo uu koox kamid noqdo.
Fursad isku mid ah, siaan, iyo kala duwaansho
Caruurta waa in uu fursad u helo inuu horimariyo xirfadahooda oo uu doorto iyada oo aan loo eegeynin jinsiga, meesha uu kasoo jeedo, dhaqanka qoomiyadiisa ama wixii kale ee sabab ah.
Kala duwanaanshaha qoyska
Aqoonsiga qoyska iyo xidhiidhka qoys ee ilmaha waxaa loo taageeraa qaab ilmaha bara dareemada qoyskooda kaas oo qiimo leh.
Caafimaadka iyo xaalada qaab
Waxbarashada caruurnimada hore iyo daryeelka waxaa loogu talo galay in ay ku hagto ilmaha qaab nololeedka kor u qaada caafimaadkooda iyo badqabkooda. Caruurta waxaa lasiiyaa fursad hormar oo dareenkooda iyo fikirkooda wax ku oolka ah.
Akhriso qodobka Sidee caruurteyda ii maqli karaan?